“Ny herisetra no tsirinkevitra hiadiankevitra” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2018 5:31 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, English, English
Ny Reframed Stories dia mangataka amin'ny olona mba hamaly ireo lohahevitra manjaka amin'ny fitantaram-baovao momba ny tenan'izy ireo sy ny lohahevitra mikasika azy ireo. Ny tantara dia mifantoka amin'ny fandinihana ny olona izay matetika isoloan'ny hafa tena amin'ny haino aman-jery fa tsy ny tenan'izy ireo.
Apawki Castro no filoha voafidy ho an'ny fifandraisana ao amin'ny Konfederasion'ny Zom-pirenena Tompotany ao Ekoadaoro (CONAIE) tamin'ny fe-potoana 2017-2020.
Mino aho fa mahaliana ny mihevitra ireo voambolana mifandraika amin'ny “herisetra” mikasika ny ady amin'ny zom-pirenena Shuar, satria voambolana niezahan'ny tsirairay lazaina sy faritana izany. Ny herisetra no tsirinkevitra hiadiankevitra, ary mino aho fa mampiseho izany ity sary ity.
Ireo voambolana manjaka avy amin'ny lahatsoratra 697 nivoaka tanelanelan'ny Mey 2016 ka hatramin'ny Jiona 2017 hita nanonona “shuar” ao anatin'ny angona Media Cloud 4 amin'ny sehatra fampitam-baovao miteny Espaniola ao Ekoadaoro. (jereo amin'ny sary lehibe kokoa).
Amin'ny tanjonay, niezaka nametraka ny hevitra izahay fa ny Fanjakana no niteraka herisetra tamin'ny alalan'ny fanomezana fitrandrahana rehetra sy ny ezaka hibodo ny faritany.
Ny fikasanay ihany koa dia ny hanasongadina ireo lohahevitra hafa izay lehibe aminay – tahaka ny maha-izy, ny fomban-drazana, sy ny kolontsaina – ary hanao fanadihadiana mifandraika kokoa amin'ny zava-misy ankehitriny sy ny fomba fijery ara-politika avy amin'izany. Na dia izany aza, tsy mahita lohahevitra mari-panondroana voatantaran'ny haino aman-jery aho ary tsy mahita izany ao anatin'ny zavon-teny ihany koa.
Tanora tompotany nasionaly ao amin'ny Toby Ekoadaoro – Ireo Ankizin'ny Fitroarana Voalohany – ho fahatsiarovana ny tsingerintaona faha-25 tamin'ny Fitroarana Voalohany nataon'ny Tompotany. Nahazoana alalana avy amin'ny mpanoratra.
Etsy andaniny, niezaka nanaratsy ireo rahalahinay sy rahavavinay Shuar ny fahefan'ny haino aman-jery rehetra avy amin'ny Fanjakana, miezaka mampiseho azy ireo ho olon-dia, mahery setra sy mitanjaka. Manomboka amin'ny fomba fihevitra mpanjanatany, niezaka ny fanjakana mba hametraka ny hevitra fa ny zom-pirenena Shuar no meloka tamin'ny fitarihana herisetra nitranga tamin'ny Desambra 2016. Tamin'izany, niezaka nanome tsiny ny vahoaka Shuar ny fanjakana noho ny ady rehetra nitranga tao amin'ny tobin'i Esperanza ao Nankints.
Mila mandika teny eo noho eo ny fahefan'ny haino aman-jery izay ampiasain'ny fanjakana amin'ireo tranga ireo isika, izay tohanan'ny haino aman-jery amin'ny ankapobeny, mikendry ny hampiroborobo ny tsirikevitry ny herisetra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mampifandray azy amin'ny herisetra sy ny habibiana.
Tsy maintsy manontany an'ity hevitra ity avy amin'ny sehatra hafa sy ireo sehatry ny vondrom-piarahamonina isika. Tsy maintsy manontany isika hoe iza no anatin'ny herisetra, ary avy aiza ny herisetra. Avy amin'ny Fanjakana sa avy amin'ny vahoaka? Miteraka herisetra tokoa ve ny fiarovana ny faritanin'ny razambe manoloana ireo orinasam-pitrandrahana, orinasan'ny solika, sy ny orinasan'ny rano mampandeha herinaratra goavana? Moa ve tsy herisetra ny maka ny tany iainan'ny vahoaka tompotany? Moa ve tsy herisetra ny mandefa miaramila any amin'ny vondrom-piarahamonina na toerana iombonana manana fahefana hitondrana ny fiainany [fizakantena]?
Nanaparitaka miaramila eny amin'ny faritra onenan'ny vahoaka Shuar ny governemanta mba hiaro fotsiny ny orinasa Shinoa izay miasa ao. Moa ve zany no anjara asan'ny Fanjakana ka tsy ny miaro ny olom-pireneny na ny orinasam-pirenena? Ireo no karazana fanontaniana tokony hotrandrahantsika sy hodinihana lalindalina kokoa.
Ao anatin'ny andiana Rising Frames novolavolaina tao anatin'ny fiarahamiasa akaiky amin'ny vondrom-piarahamonina tompotany ao Sarayaku sy ny zom-pirenena Shuar ity, izay samy miorina ao amin'ny faritra Amazonina Ekoadaoreana. Ny vahoaka Sarayaku sy Shuar dia nanatontosa tolona naharitra ela teo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena mba hampitsahatra ny tetikasa fitrandrahana ao amin'ny faritanin'izy ireo, ary anisan'ny zava-dehibe tamin'ity tolona ity ny fandefasan-kafatry ny olona. Nangataka tamin'ireo mpikambana izahay mba hamaly ny fanadihadian'ny haino aman-jery voalohany indrindra izay milaza ny fomba fisehoan'ireo lohahevitra mifandraika amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo amin'ny vaovao.
Ity lahatsoratra ity dia nohamarinin'i Belen Febres-Cordero.